China 8 Axis စက်ရုပ်ဂဟေဆော်စက်နှင့်ရာထူးနှစ်ခုထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသူ Yunhua
စက်ရုပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်။ နောက်ထပ်အလုပ်ဇယားတစ်ခုထပ်ပေါင်းခြင်းသည်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ စက်ရုပ်သည်အလုပ်အပိုင်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဂဟေဆော်နိုင်ရန်အတွက်အလုပ်သမားသည်အလုပ်ခွင်စားပွဲတစ်ခုတွင်အလုပ်အပိုင်းတစ်ခုကိုရွေးပါလိမ့်မည်။
ကုန်ပစ္စည်း parameter သည် & အသေးစိတ်ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ 8 Axis စက်ရုပ်ဂဟေဆော်စက်သည် positioner နှစ်ခုနှင့်အတူလုပ်ထားသော standard workstation တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပိုဆောင်းပြင်ပဝင်ရိုးသည်စက်ရုပ်နှင့်အတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးစက်ရုပ်သည်ရှုပ်ထွေးသောအသုံးချမှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်သည်။ ထို positioner နှစ်ခုကို work table ဟုလည်းခေါ်နိုင်သည်။ remote control box မှထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ပြီးတာနဲ့အလုပ်သမားက fix-up အလုပ်ပြီးသွားရင် remote control box ကိုနှိပ်ပါ။ စက်ရုပ်သည်ဤဂဟေဆော်ခြင်းဇယား၌ယခင်ဂိုးသွင်းပြီးနောက်သွားမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂဟေဆော်သောမီးချောင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်သန့်ရှင်းသောဘူတာကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
YOO HEART ကုမ္ပဏီသည် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးနိုင်သည်။ အရေးပေါ် ဦး စားပေးမှုအရဖောက်သည်များသည်ရေကြောင်းနှင့်လေကြောင်းဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ YOO HEART စက်ရုပ်ထုပ်ပိုးခြင်းအမှုန်များသည်ပင်လယ်နှင့်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် PL၊ မူရင်းလက်မှတ်၊ ငွေတောင်းခံလွှာနှင့်အခြားဖိုင်များကဲ့သို့သောဖိုင်များအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပါမည်။ အဓိကအလုပ်မှာစက်ရုပ်တိုင်းကိုဖောက်သည်ဆိပ်ကမ်းသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရက် (၂၀) ​​အတွင်းအရောက်ပို့ပေးနိုင်ခြင်းမရှိစေရန်အဓိကအလုပ်ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်တိုင်းသည် YOO HEART စက်ရုပ်ကိုသူတို့မ ၀ ယ်မီသိသင့်သည်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့် YOO HEART စက်ရုပ်တစ်လုံးရရှိပြီးနောက်သူတို့၏အလုပ်သမားသည် YOO HEART စက်ရုံတွင် ၃ ရက် ၃ ရက်အခမဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလိမ့်မည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ် WhatsApp အုပ်စုရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ လျှပ်စစ်၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်များအပြီးရောင်းချရန်တာ ၀ န်ယူသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရှင်များပါလိမ့်မည်။ ပြoneနာတစ်ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရှင်သည်ပြcustomerနာကိုဖြေရှင်းရန်ဖောက်သည်ကုမ္ပဏီသို့သွားလိမ့်မည်။
Q1 ။ Plc နှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့ကထိန်းချုပ်ထားသည့် positioner ကိုခြားနားချက်ကဘာလဲ။
A. အကြီးမားဆုံးပြproblemနာက positioner ကို PLC ကထိန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်၊ position ကနေအခြားအနေအထားအထိရွှေ့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်။ စက်ရုပ်က positioner (Synergy) နဲ့ပူးပေါင်းလို့မရဘူး။ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်၎င်းသည် positioner နှင့်ပူးပေါင်းနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာအခက်အခဲရှိသည်။
Q2 ။ Auto-fix table ကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲ။
အေ။ အခု ၂၂ input နဲ့ ၂၂ output ရတယ်။ သင်သာလျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင်မှအချက်ပြပေးရန်လိုအပ်သည်။
Q3 ။ မင်းရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမီးသန့်ရှင်းရေးစခန်းရှိသလား။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသန့်ရှင်းတဲ့ဘူတာရုံရှိတယ်။ ၎င်းသည် optional item တစ်ခုဖြစ်သည်။
Q4 ။ Torch သန့်ရှင်းတဲ့ဘူတာကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
A. သင် Torch သန့်ရှင်းရေးဘူတာရုံအတွက်လမ်းညွှန်များကိုရရှိပါမည်။ သန့်ရှင်းရေးစခန်းကိုလောင်ကျွမ်းရန်အချက်ပြရုံသာလိုတော့သည်။
Q5 ။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောဘူတာရုံသည်မည်သည့်အချက်ပြမီးလိုအပ်သနည်း။
A. အနည်းဆုံးအချက် ၄ ချက်ရှိသည်။ Torch clean station လိုအပ်သည်။ ဝါယာကြိုးအချက်အလက်များဖြတ်ခြင်း၊ ရေမှုန်ရေမွှားအချက်ပြခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးအချက်ပြအချက်ပြခြင်းနှင့်အချက်ပြနေရာချထားခြင်း။
နောက်တစ်ခု:7Axis စက်ရုပ် Arc Welding Workstation